Censorship.no! - လွတ်လပ်စွာ ရှာဖွေပါ
CENO ဘရောက်ဇာကို ရယူပါ
CENO (Censorship.no! ၏ အတိုကောက်) သည် အင်တာနက် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း အခြေခံအဆောက်အအုံကို ရှောင်ရှားရန် ချဉ်းကပ်နည်း အသစ်ကို အသုံးပြုသော မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ ဖြစ်ပြီး ဆင်ဆာလုပ်ထားသော ဇုန်တွင် နေထိုင်သည့် သုံးစွဲသူများအား ပြန်ထုတ်ထားသော အကြောင်းအရာကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အချင်းချင်း မျှဝေခွင့်ပြုသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း ၏ ပိုဒ်ခွဲ 18၊ 19 နှင့် 20 ကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော CENO သည် ဆင်ဆာရှောင်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေများ၏ မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးသည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော မိတ်ဆွေအချင်းချင်း၏ ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် အင်တာနက် လိုင်းကျချိန် သို့မဟုတ် ဆင်ဆာလုပ်ခံရချိန်တွင်ပင် ဝက်ဘ်ကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲပါ။ CENO ဘရောက်ဇာကို ယနေ့ ထည့်သွင်းပြီး နောက်တစ်ကြိမ် 🔌 ပလပ်ဖြုတ်ခံရမည့် အချိန်အတွက် ပြင်ဆင်ပါ။
ကွန်ရက်ကို ကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ပါ၊ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ပါ
ပေါင်းကူးတစ်ခု ဖြစ်လာခြင်းဖြင့် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ပါ။ ကွန်ရက်တွင် ချက်ချင်း ပါဝင်ရန် CENO ဘရောက်ဇာကို တပ်ဆင်၍ လုပ်ဆောင်ပြီး ဆင်ဆာလုပ်ထားသော နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများပါ ပိတ်ဆို့ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ရရှိနိုင်ရန် ချဲ့ထွင်ပါ။
CENO ကို Firefox for Android (ခေါ် Mozilla Fennec) ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော Ouinet စာကြည့်တိုက် ကို အသုံးပြုရန် ချဲ့ထွင်ထားသည့်အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူတို့အား အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်နိုင်မှုအတွက် ၎င်းတို့၏ အက်ပ်များထဲသို့ CENO ကွန်ရက်ကို ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည်။
CENO ဘရောက်ဇာသည် eQualit.ie ၏ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု၊ အွန်လိုင်း လုံခြုံရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ အချင်းအချင်း ဆက်သွယ်ခွင့်ကို အလေးထားပြီး ကန့်သတ်မထားသော၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်များကို တီထွင်ဖန်တီးသည့် ကနေဒါ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ နည်းပညာ ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အင်တာနက်သုံးသူတိုင်း၏ အခွင့်အရေးများနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား လမ်းညွှန်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးများက လှုံ့ဆော်သည်။